I-apple iphone 12 pro / max vs iphone xs / max
none Izindaba Nokubuyekezwa I-Apple iPhone 12 Pro / Max vs iPhone XS / Max
Kulezi zinsuku, ama-smartphones athuthuka ngesivinini esincane kunakuqala, okwenza ukuthuthuka unyaka nonyaka kungakufanele. Futhi ngenkathi izibalo zikhombisa ukuthi abantu manje bathambekele ekusebenziseni izingcingo zabo cishe iminyaka engu-3 ngaphambi kokushintsha, amadili abathwali bamafoni avame ukuza nenkontileka yezinyanga ezingama-24. Lokhu kusho ukuthi, uma une-iPhone XS noma i-XS Max eminyakeni emibili edlule, ungahle ubheke ukuthola i-iPhone entsha khona manje.
Futhi, kunjalo, nge I-iPhone 12 Umndeni usanda kumemezela, labo ngabazongenela ukhetho olukhulu. Ngenkathi i-iPhone 11 ne-iPhone 12 kungabalandeli abanengqondo be-iPhone XR, uma unedivayisi ye-XS, ungahle ucabangele I-iPhone 12 Pro noma i-Pro Max . Okuphakamisa imibuzo ngokushesha: 'Sebehambe ibanga elingakanani ama-iPhones eminyakeni emibili?' futhi 'Ingabe kufanelekile ukuthuthukela kwi-iPhone 12 Pro noma i-12 Pro Max?'
Thenga i-iPhone 12 Proku-Best Buy (iVerizon: AT & T: T-Mobile)
Thenga i-iPhone XSku-Best Buy (iVerizon: AT&T)
Thenga i-iPhone XS Maxe-Best Buy (AT & T)
Hhayi-ke, yilokho & apos; esikukho lapha ukusiza ngakho! Kunokuningi kokudlula kukho, ngakho-ke ake singene kukho ngqo.
Ungahle uthande futhi ukufunda:
- I-6.1 'Super Retina XDR, i-Apple A14 Bionic, i-5G, ikhamera ye-Triple
$ 999Thenga kwa-Apple
I-iPhone 12 Pro / Max vs iPhone XS / Max: izinguquko zedizayini
Kunzima ukuthola ukugcizelelwa okusobala ngokwedlulele kumakhamera kunalokhu Ama-iPhones aqhamuka kulezi zizukulwane ezimbili abukeka efana kodwa nawo ahlukile kakhulu. Kungenzeka kanjani lokho? Ake sichaze.
Umehluko omkhulu kusobala ukuthi uhlaka olusha oluyisicaba lwezinhlobo ze-iPhone 12, olubenza banciphe kancane futhi, ngokweqiniso, lubahlukanisa nezizukulwane ezindala. Ngaphandle kwalokho, imodyuli yekhamera mhlawumbe umehluko omkhulu kunayo yonke. Manje ineminyaka emibili ubudala, ikhamera encane, emise okwenziwe ngobhontshisi ku-iPhone XS / Max yakho iba yisiginali yokuthi usebenzisa i-iPhone yasendulo. Amakhamera amathathu kulapho okwamanje kungukuthi uma ufuna ukugqama phakathi kwesixuku se-iPhone. Kepha okuningi ngabo ngokuhamba kwesikhathi.
Phambili, ukuboniswa kwepheya le-iPhone XS nokubukeka kwayo okulingana ne-12 Pro kucishe kufane, notch isathatha ingxenye enkulu yokuphela okuphezulu namakhona agobile nobubanzi bezinto okusalokhu kunjalo. Kepha ukukhonjiswa kwezinto zombili zefomu akunasayizi ehlukene kuphela kepha namapaneli e-OLED ahlukile futhi.
Isibonisi se-iPhone 12 Pro vs iPhone XS
Usayizi:6.1 amayintshi vs 5.8 amayintshi
Ingilazi:ICeramic Shield vs Gorilla Glass
Khombisa:Super Retina XDR vs Super Retina HD
Ukulungiswa:Amaphikseli angama-2532 x 1170 vs 2436 x 1125
Ukukhanya okukhulu:Ama-800 nits (ejwayelekile) / ama-1200 nits HDR vs 625 nits (ejwayelekile)
Manje, yini eshintshile? Yebo, isibonisi sathola amayintshi angu-0.3, okwenza yonke i-iPhone 12 Pro ibe nkudlwana kune-iPhone XS kepha mhlawumbe ayenele ukukwenza ubheke omunye usayizi uma wena ne-apos ujabule nge-XS yakho. Isinqumo senziwe ngcono ukufanisa nosayizi omusha futhi zombili izingcingo zinePII efanayo (460 vs 458), ngakho-ke akukho ukuthuthuka okukhulu lapho.
Yiziphi izinzuzo ozitholayo nge-iPhone 12 Pro, noma kunjalo, ukukhanya okungcono kakhulu, yingakho i-Apple ikubiza nge-XDR (kusuka ku-eXtreme Dynamic Range). Lokhu kuzoholela ekusetshenzisweni okungcono kokukhanya kwelanga nokuhlangenwe nakho okungcono kokubuka ividiyo.
Okunye okungeziwe okusha okubizwa nge-Ceramic Shield, okuyindlela i-Apple ebiza ngayo ingilazi esanda kwakhiwa ehlala phezu kwephaneli le-OLED. Inokusebenza okungcono kokudonsa okuphindwe kane, kusho u-Apple, okufanele kukwenze uzethembe ngokwengeziwe ukuthi i-iPhone 12 yakho izosinda ngamaconsi ambalwa ngaphambi kokuqhekeka kwesikrini.
5.78 x 2.82 x 0.29 amayintshi
I-Apple iPhone XS
5.65 x 2.79 x 0.3 amayintshi
6.33 x 3.07 x 0.29 amayintshi
I-Apple iPhone XS Max
6.2 x 3.05 x 0.3 amayintshi
Qhathanisa lawa namanye amafoni usebenzisa ithuluzi lethu lokuqhathanisa usayizi.
Isibonisi se-iPhone 12 Pro Max vs iPhone XS Max
Usayizi:6.5 amayintshi vs 6.7 amayintshi
Ukulungiswa:Amaphikseli angama-2778 x 1284 vs 2688 x 1242
Indaba efanayo, njengoba ungalindela. Ukwehla kwamandla emali okuphakathi kwezizukulwane ezimbili, kubhangqwe nenombolo efanele yamaphikseli amasha. Sesivele sichazile izinzuzo zeXDR neCeramic Shield. Kumele uqaphele ukuthi i-iPhone 12 Pro Max inesibonisi esikhulu kunazo zonke ku-iPhone okwamanje. Uma ulangazelela ukuthola indawo ethe xaxa yesikrini, uzuza cishe i-1 square inch noma u-6.2% ngaphezulu nge-iPhone 12 Pro Max.
Imibala ye-iPhone 12 Pro / Max vs iPhone XS / Max
Lapho ukhuluma ngokubukeka kwe-iPhone asikwazi ukukhohlwa ukusho imibala. I-iPhone 12 Pro ne-Pro Max zinemibala emine: Pacific Blue, Silver, Graphite, Gold. Isiliva neGolide kuyefana nakwezinye izinhlobo ze-iPhone XS, ngomehluko wokuthi ukuphela kwe-matte kuma-iPhone 12 Pros kwenza ukukhanya kukhanye ngokuhlukile. Futhi-ke, bazizwa behlukile ekuthintweni. IPacific Blue umbala omusha ongeke ufinyelele kunoma iyiphi enye i-iPhone ne-Graphite engena esikhundleni se-Space Grey futhi i-grey elula kancane. Njengenjwayelo, amamodeli we-Pro athola imibala ecashile, enamathoni aphansi.
Izinketho zombala ze-iPhone 12 Pro nezingu-12 Pro Max
I-iPhone 12 Pro / Max vs iPhone XS / Max izinkomba
Chip:I-Apple A14 5nm ne-Apple A12 7nm chipset
Isitoreji:I-128GB vs 64GB (isisekelo)
Ukuxhumana:I-5G vs 4G LTE
Imemori:6GB vs 4GB RAM
Ukumelana namanzi:6 vs 2 metres ukujula
Kulo nyaka, i-Apple yethule i-chip yayo yokuqala eyakhiwe kusetshenziswa inqubo ye-5nm, njenge-A12 kwakuyi-iPhone yokuqala esebenzisa i-chip ye-7nm. Ukwakhiwa okusha kwenza i-A14 ingabi namandla nje kuphela kepha futhi isebenzise amandla amaningi futhi. Uma ufuna izinombolo ezithile ezingavuthiwe, i-A14 inama-transistor ayi-11.8 billion ngokuqhathanisa nama-A12 & apos; s 6.9 billion. Lokho kusondele ngokuphindwe kabili ngaphezu kweminyaka emibili nje kuphela. Siyaqiniseka ukuthi i-iPhone XS yakho ayilona iqiniso nanamuhla, kepha i-A14 iyincazelo ye-izinga elilandelayo.
Kepha mhlawumbe okubaluleke ngaphezu kokusebenza okuthuthukile ukwengezwa kwe-5G kuwo wonke amamodeli we-iPhone 12. Yebo, ukusetshenziswa kwayo, kanye nokumbozwa, kukude nezinga elidingekayo ukuze i-5G ibaluleke ekusetshenzisweni kwakho kwansuku zonke, kepha ngonyaka noma emibili, isimo singahluka ngokuphelele.
I-Apple futhi ekugcineni ihlinzeka nge-128GB njengesitoreji esiyisisekelo, noma ngabe i-& apos; s kuphela kumamodeli we-Pro, okusho ukuthi ungonga imali ngokungathuthukisi okuhlukile kwe-256GB. I-Apple idume ngokungakhulumi ngenani le-RAM ezingcingweni zayo, kepha izinhlobo ze-iPhone 12 Pro kusolwa ukuthi zithola u-6GB.
Ngaphambi kokuba sifike engxenyeni ebaluleke kakhulu ye-iPhone, ikhamera yayo, ake sikhulume nge ...
Impilo yebhethri ye-iPhone 12 Pro vs iPhone XS
Umthamo webhethri kungenye into i-Apple engabelani ngayo njalo, ingagxili ekutheni ifoni izohlala malini. Ngaphandle kwalokho, njengoba i-iPhone 12 Pro manje isifinyelele ezandleni zababuyekezi nabasebenzisi be-tinkerers, ukuqaqwa kwe-iPhone 12 Pro kukhombisile ukuthi inebhethri le-2815mAh. Ngenkathi leyo & apos ingaphansi kwamandla webhethri angama-3046mAh we-iPhone 11 Pro, kusengukuthuthuka ngaphezu kwebhethri le-2659mAh le-iPhone XS.
Ngokusetshenziswa kwangempela, okwamanje, singancika kwimininingwane esemthethweni, ethi i-iPhone 12 Pro izokunikeza amahora ayi-17 wokudlala ividiyo ngenkathi i-iPhone XS ineminyaka engu-14 kuphela. Lokho kukwanda ngama-20%. Kepha uma ngabe usebenzise i-iPhone XS yakho iminyaka emibili, umehluko empilweni yebhethri kungenzeka ube ngaphezulu kakhulu kwama-20%.
IPhone 12 Pro Max vs iPhone XS Max ibhethri impilo
Ngokuqondene namamodeli amakhulu, ibhethri le-iPhone 12 Pro Max lembulwe ukuthi liyi-3,687mAh noma cishe i-500mAh likhulu kunebhethri le-3,179mAh le-iPhone XS Max. Ngenkathi lokho & apos; azungeze ukwanda komthamo ngo-16%, u-Apple uthi i-12 Pro Max inikela ngamahora ama-5 ngaphezulu kwesikhathi sokudlala ividiyo (15h ku-XS Max vs 20 ku-12 Pro Max), okunikeza umbono wokuthi kungakanani isebenza kahle i-chip entsha, uma kubhekwa ukuthi i-12 Pro Max inesibonisi esikhudlwana.
Ake sibheke imiphumela ekuhlolweni kwethu kwebhethri.
Isivivinyo sokuphequlula 60Hz
Ukusakazwa kwevidiyo kwe-YouTube
igama amahora Okuphakeme kungcono
I-Apple iPhone 12 Pro 12h 35 imiz
I-Apple iPhone 12 Pro Max 14h 6 imiz
I-Apple iPhone XS 7h 49 amaminithi
I-Apple iPhone XS Max 8h 33 imiz
I-Apple iPhone 12 Pro 6h 48 imiz
I-Apple iPhone 12 Pro Max 8h 37 amaminithi
I-Apple iPhone XS 4h 42 imiz
I-Apple iPhone XS Max 5h 25 amaminithi
igama imizuzu I-Lower ingcono
I-Apple iPhone 12 Pro 118
I-Apple iPhone 12 Pro Max 118
I-Apple iPhone XS 185
I-Apple iPhone XS Max 209
Njengoba ukwazi ukubona, umehluko mkhulu impela. Uma usebenzisa i-iPhone XS encane, ungathola cishe amahora ama-5 wesikhathi sokuphequlula ngokushintshela ku-iPhone 12 Pro. Noma kuqhathaniswa ne-iPhone XS Max, izinzuzo zinkulu impela. Futhi uma uthuthuka usuka ku-XS Max uye ku-12 Pro Max, uzothola cishe amahora angu-5.5 wokuphequlula.
Ngokusakazwa kwevidiyo, i-iPhone XS iphinde yenze kabi kakhulu. I-iPhone 12 Pro idonse amahora amabili ngaphezulu, okuyi-movie eyodwa ngaphezulu ongayibuka kuyo uma kuqhathaniswa ne-iPhone XS. I-iPhone XS Max yenze kangcono kancane kepha isimbi kakhulu kunePro entsha futhi ingemuva kwe-12 Pro Max, ekunika amahora amathathu wonke ukusakazwa kwevidiyo.
Njengoba ukwazi ukubona, izinombolo zokubukwa kwamavidiyo zikude kakhulu nama-Apple & apos; ama-17 nama-20 amahora we-12 Pro ne-Pro Max ngokulandelana. I-Apple ayinikezi imininingwane mayelana nezilungiselelo ezithile ezisebenzisayo ukufeza le miphumela. Ukuxhumeka kwenethiwekhi yeselula, i-Wi-Fi, ukukhanya okukhombisa nokunye ukulungiswa kuzothinta impilo yebhethri, ngakho-ke imiphumela yakho ingahluka nayo.
Sekukonke, kuya ngokuthi usebenzisa ifoni yakho kangakanani, i-iPhone 12 Pro izokugcina okungenani isigamu sosuku ngaphezulu, mhlawumbe ngisho nosuku olugcwele uma ungekho kuyo njalo.
Isikhathi sokushaja ibona intuthuko futhi yize i-iPhone 12 Pro inesikhathi sokushaja esibi lapho iqhathaniswa nabaholi abakule mboni. Ungasebenzisa ithuluzi lethu ukwengeza noma iyiphi ifoni ekuqhathaniseni futhi uma ungeza i-OnePlus 8T, ngokwesibonelo, uzobona ukuthi sisho ukuthini.
Ikhamera ye-iPhone 12 Pro / Max vs iPhone XS / Max
Imodyuli yekhamera ye-iPhone 12 Pro Besivele silikhulumile iqiniso elisobala lokuthi i-iPhone 12 Pro ne-Pro Max banekhamera yesithathu kodwa umehluko weqa kakhulu kunalokho. Okufanele futhi ukukusho ukuthi kulo nyaka, kunomehluko omncane phakathi kwamakhamera we-iPhone 12 Pro ne-12 Pro Max, eyokuqala yamamodeli we-Pro.
I-iPhone XS / Max
Ikhamera enkulu 12MP Wide: ƒ / 1.6 ukuvula I-12MP Wide: ƒ / 1.6 ukuvula, amaphikseli amakhulu, ukuzinza kokushintsha kwenzwa I-12MP Wide: ƒ / 1.8 ukuvula
Ikhamera yesibili I-12MP Telephoto: ƒ / 2.0 ukuvula, ukusondeza okubonakalayo okungu-2X, ukusondeza kwedijithali okungu-10X I-12MP Telephoto: ƒ / 2.2 ukuvula, ukusondeza okubonakalayo okungu-2.5X, ukusondeza kwedijithali okungu-12X I-12MP Telephoto: ƒ / 2.8 ukuvula, ukusondeza okubonakalayo okungu-2X, ukusondeza kwedijithali okungu-10X
Ikhamera yesithathu I-12MP Ultra Wide: ƒ / 2.4 ukuvula I-12MP Ultra Wide: ƒ / 2.4 ukuvula Akunjalo
isithwebuli Ukuma kwemodi yasebusuku, i-autofocus esheshayo ekukhanyeni okuphansi, i-AR eyenziwe ngcono Ukuma kwemodi yasebusuku, ukugxilisa ngokushesha ngokushesha ekukhanyeni okuphansi, i-AR ethuthukisiwe Akunjalo
Ikhamera yangaphambili Ukuvulwa kwe-12MP ƒ / 2.2 Ukuvulwa kwe-12MP ƒ / 2.2 7MP ƒ / 2.2 ukuvula
Njengoba kuba sobala kakhulu etafuleni elingenhla, umehluko omkhulu kunayo yonke i-Hardware iyikhamera engeziwe ye-ultra-wide-angle kanye ne-LiDAR scanner. Abangaphambili & apos; mhlawumbe ujwayelene ngisho noma ungenayo ku-iPhone XS yakho. Okokugcina, kuhle, futhi ukwengeza okusha kuma-iPhones okunika indlela engcono yokuthatha imvelo yakho futhi lapho into ngayinye ikwenzela amachashazi we-infrared, afana nokuthi ikhamera ye-True Depth isebenza kanjani ku-Face ID. Ngasohlangothini olusebenzayo, kusiza amamodeli we-iPhone 12 Pro ukulandelela izinto endaweni emnyama noma ekhanyayo futhi uzigcine zibheke ukutholwa okungcono kakhulu.
Kepha ngenkathi kusephepheni izinzwa eziyinhloko kulezi zingcingo zingabukeka zifana, empeleni, ama-iPhone 12 Pros anamakhamera anekhono kakhulu. Nazi ezinye izici zesithombe abanazo i-iPhone XS engekho:
Ukuma kwemodi yasebusuku
I-Apple ProRaw *
* eza kamuva nge-software update
Imodi yasebusuku iyodwa yanele kubantu abaningi ukuthi bayoyithuthukisa ngoba ngaphambi kokufika kwayo ukusebenza okukhanyayo okuphansi kwama-iPhones kwakukubi. Uzozibonela umehluko uma sesinamasampula ekhamera avela kuzo zombili izingcingo. Futhi kufanele uqaphele ukuthi imodi yasebusuku manje ingasetshenziswa namakhamera we-Ultra Wide neTelephoto.
Ukuqhubekela ekurekhodweni kwevidiyo, uhlu lokuthuthuka luba lude kuphela:
Ukuqoshwa kwe-HRD ngeDolby Vision kufika kuma-60fps
Ngokushesha Thatha ividiyo
Isikhathi semodi yasebusuku siphelile
Ngokuyinhloko, amamodeli we-iPhone 12 Pro yimishini yokuqopha ividiyo ephakeme kakhulu, ngakho-ke uma & ampos; uyi-YouTuber efisa noma uthanda nje ukuqopha amavidiyo wanoma yiluphi uhlobo, ukukhuphula izinga kuzokufanele lokho.
Okungcono nakakhulu ukuthi i-Apple iletha lezi zici eziningi kwikhamera ebheke phambili.
Nakhu okungenziwa yikhamera ye-selfie ye-iPhone 12 Pro ukuthi lena kumamodeli we-iPhone XS ayikwazi & apos;
Ukuqoshwa kwevidiyo ye-HDR ngeDolby Vision kufika kuma-fps angama-30
Ukuqoshwa kwevidiyo okungu-4K kufika kuma-60fps
Ukuzinza kwevidiyo yeCinematic ku-4K
Ividiyo ehamba kancane ngo-1080p kuze kufike ku-120fps
Iminyaka emibili ikulethela inqwaba yokuthuthuka okuhle, lokho ngokuqinisekile & ama-apos; Manje ake sihlole amasampula ambalwa!
I-iPhone 12 Pro vs iPhone XS: izithombe zesampula
I-iPhone 12 Pro kwesobunxele, i-iPhone XS kwesokudla Ngokumangazayo, isithombe se-iPhone XS sinemibala ebukeka kahle ngokwengeziwe kulesi simo. Isithombe se-iPhone 12 Pro sinombala omncane osawolintshi jikelele. Sizisebenzisile izithombe ze-iPhone ezinomphumela ofanayo kepha umehluko onjalo phakathi kwama-iPhones amabili awujwayelekile neze. Mhlawumbe ezinye zezindawo ezingemuva zikhubaze ubuchule be-iPhone 12 Pro ekwenzeni izinguquko obekungafanele bazenze.
I-iPhone 12 Pro kwesokunxele, i-iPhone XS ingakwesokudla I-iPhone 12 Pro ingakwesokunxele, i-iPhone XS ingakwesokudla I-iPhone 12 Pro ingakwesokunxele, i-iPhone XS ingakwesokudla I-iPhone 12 Pro ingakwesokunxele, i-iPhone XS ingakwesokudla I-iPhone 12 Pro kwesobunxele, i-iPhone XS kwesokudla Yini & apos ebonakalayo kulezi zithombe ukuthi i-Apple yenze ama-tweaks ekukhiqizweni kombala ku-iPhone 12 Pro futhi ngenxa yalokho, izithombe zayo zibukeka zingokwemvelo ngokwengeziwe. Amaleveli wokuvezwa nawo abhekiswe ekudubuleni okukhanyayo.
I-iPhone 12 Pro kwesobunxele, i-iPhone XS kwesokudla Uma kukhulunywa ngokuthwebula izithombe, lawa masampula okuqala abukeka ecishe afane, okusho okungenani ezimeni ezijwayelekile zokukhanyisa, wena nama-apos awutholi lukhulu ku-iPhone 12 Pro.
I-iPhone 12 Pro ngakwesobunxele, i-iPhone XS ingakwesokudla Kumazinga okusondeza max noma ifoni engumnqobi. Imibala yehluke kancane kepha amazinga emininingwane acishe afane kuzithombe zombili. Akumangazi ngempela uma ubheka yomibili le midlalo ikhamera yokusondeza i-2X zoom.
I-iPhone 12 Pro ngakwesobunxele, i-iPhone XS kwesokudla Kumasampuli ambalwa, kufaka phakathi le zoom eyodwa ye-5X, thina & apos; siqaphele ukuthi i-iPhone 12 Pro inyusa ukuvezwa kakhulu uma kuqhathaniswa ne-iPhone XS. Umphumela uba isithombe esikhanya kakhulu, esibukeka singcono kakhulu.
I-iPhone 12 Pro kwesobunxele, i-iPhone XS kwesokudla i-Selfies ifana ngokumangazayo yize ithuthukiselwe inzwa ye-12MP kulo nyaka. Ngenkathi uzothola isithombe esikhudlwana esizoba nemininingwane ethe xaxa uma sibukwa ku-zoom ka-100%, empeleni ikhamera ye-iPhone XS ibonakala ifana nokukhanya emini.
I-iPhone 12 Pro vs iPhone XS: Izithombe zesampula zemodi yasebusuku
Imodi yasebusuku mhlawumbe umehluko omkhulu kakhulu phakathi kwalezi zinhlelo ezimbili zekhamera, noma okungenani leyo enomthelela omkhulu kwikhwalithi yesithombe. Ngenkathi ukuqoshwa okujwayelekile komsebenzisi kweDolby Vision kungahle kungabi ndaba zalutho, Imodi yasebusuku yinto wonke umuntu angayazisa futhi ayisebenzise ngaso sonke isikhathi. Futhi, njengoba uzobona ngezansi, umehluko uyagqama.
I-iPhone 12 Pro ingakwesokunxele, i-iPhone XS ingakwesokudla I-iPhone 12 Pro ingakwesokunxele, i-iPhone XS ingakwesokudla I-iPhone 12 Pro ingakwesokunxele, i-iPhone XS ingakwesokudla I-iPhone 12 Pro kwesobunxele, i-iPhone XS khona lapho & asikho isidingo sokubeka imibono lapha. I-iPhone 12 Pro ishaya i-XS ebusuku. Izithombe eziyi-12 zePro zibukeka zicijile, azikhanyi ngokweqile njengoba amanye amafoni ethanda ukwenza isibhamu sasebusuku, futhi imibala icebile. Nina niyojabula ukuhlanganyela lezi zithombe ezinkundleni zokuxhumana noma nizitholele. Okwamanje, lawa avela ku-XS aren & apos; awakufanele ngempela ukugcinwa efonini yakho.
I-iPhone 12 Pro kwesobunxele, i-iPhone XS kwesokudla Izinto ziba zimbi kakhulu uma kukhulunywa ngezithombe ezinokukhanya okuncane. Umehluko imini nobusuku, ngaphandle kwehaba. I-iPhone 12 Pro yenze umsebenzi omuhle kulesi simo. Ukuphela kwento edutshulwe i-XS ukwenza kahle ukukhombisa ukuthi imvelo ibimnyama kanjani empeleni, okugqamisa kuphela impumelelo engu-12 Pro & apos;
I-iPhone 12 Pro ingakwesobunxele, i-iPhone XS ingakwesokudla Umehluko phakathi kwama-selfies angakhanyi kakhulu awumkhulu kodwa kusabonakala ngokusobala ukuthi i-iPhone 12 Pro yenza umsebenzi ongcono kakhulu.
Sekukonke, uma amakhamera abalulekile kuwe, kufanele ulingwe yilokho i-iPhone 12 Pro ne-12 Pro Max okufanele banikele ngakho. Khumbula ukuthi asibandakanyi noma isiphi isibhamu esibanzi esivela ku-iPhone 12 Pro kwazise iXS ayinayo nhlobo ikhamera enjalo. Ngalezo zithombe, kufaka phakathi ukukhanya okungakhanyi kakhulu okubanzi, izinzuzo ze-iPhone 12 Pro bezizobonakala kakhulu.
Ngakho-ke, manje, uma kungenzeka ufike lapha ngaphandle kwemininingwane ekhona, kungenzeka ukuthi uyazibuza ukuthi kungakubiza ini ukuthola eyodwa yalezi zinhlobo ze-iPhone 12 Pro ...
Izintengo ze-iPhone 12 Pro / Max vs iPhone XS / Max
Hhayi-ke, uma ulahlekelwe umcimbi wokumenyezelwa we-iPhone 12 nakho konke okulandelayo okulandelayo, uzolindela isimanga esihle. Izinhlobo ezintsha ze-Pro ziqala ngamanani afanayo okwenziwa yi-iPhone XS neXS Max eminyakeni emibili eyedlule:
I-iPhone 12 Pro iqala ku- $ 999
I-iPhone 12 Pro Max iqala ku- $ 1099
Khumbula ukuthi izingcingo ezintsha ziza ngaphandle kweshaja ebhokisini, kuphela i-Lightning to USB Type-C cable, ngakho-ke qiniseka ukuthi uneshaja efanelekile oseduze uma ufuna ukusebenzisa amandla wefoni & apos; Uma udinga ukuthenga eyodwa, hlola eyethu Amashaja asheshayo we-iPhone isihloko.
Indlela esiyibona ngayo, kunezizathu ezimbili ezibalulekile zokuthuthuka kusuka ku-iPhone XS / Max kuye kwi-iPhone 12 Pro / Max.
Okokuqala, impilo yebhethri eyenziwe ngcono kakhulu. Okwamanje, kungenzeka ukuthi usufuna ukukhokhisa i-iPhone yakho yakudala ngesikhathi esithile ntambama. Nge-iPhone 12 Pro, ukukhathazeka kwebhethri kuzobe kungasekho futhi mhlawumbe ngeke kubuye isikhathi eside.
Okwesibili, uhlelo lwekhamera olungcono. Ihluke kakhulu, inekhono futhi icwengisiswe kakhulu kunanini ngaphambili. Yebo, ngonyaka ozayo lezo zitatimende zizoba yiqiniso nakwikhamera ye-iPhone 13 Pro & apos, kodwa lokho kuhamba kanjani. Imodi yasebusuku kanye nezinguquko ekurekhodweni kwevidiyo yinto abasebenzisi abangajwayelekile abazoyibona.
Kodwa-ke, uma ungenawo ama-gripes ngempilo yebhethri ye-iPhone XS yakho futhi ungathathi izithombe ebumnyameni kakhulu, ingasaphathwa eyokusebenzisa i-AR, khona-ke ungayibamba nayo isikhathi eside.
Futhi kuthiwani nge-5G? Ngemuva kwakho konke, ama-apos; siisici esisha somndeni we-iPhone 12. Yebo, kunzima kakhulu ukuyijabulela okwamanje. Impela, uma uzithola udlulisa amafayela amakhulu ngaso sonke isikhathi futhi uzizwa sengathi uzosizakala ngejubane elithuthukisiwe, qhubeka uthuthuke. Kepha ngo-2020, ama & apos asesekude nesici okufanele ube naso.
zama ukubamba ifayili alitholakali ngaphandle kweJava
ingabe ama-iphone ahlelela ukonga emini
I-iphone 5c ikhulisa intengo yeselula
Izindlela Zokugenca Zokusebenza Kwewebhu
Amafoni amancane kakhulu futhi ahambisanayo ongawathenga (2021)
Umhlahlandlela Wokusinda Kwezokuzijabulisa - amahlaya ama-8 ahlekisayo we-Netflix stand-up ongawabona ngesikhathi sokuhlukaniswa
Ungawusebenzisa kanjani umyalo we-OK Google kusuka kunoma yisiphi isikrini efonini yakho ye-Android (kufaka phakathi ukukhiya isikrini)
Ungayisusa kanjani i-Galaxy S6 ngokuchofoza okukodwa ngaphandle kokukhubeka ikhawunta ye-KNOX (kufakwe iVerizon)
Ungasikhulula kanjani isitoreji ku-iPhone
Abavikeli besikrini abancane be-iPhone 12